Maitiro ekumisikidza rima maitiro muGoogle Mepu pa Android ▷ ➡️ Android Pop ▷ ➡️
Maitiro ekumisikidza rima maitiro muGoogle Mepu pane Android, Google Mepu ndeimwe yeanoshandiswa zvakanyanya pasi rese uye, kunyangwe paine mamwe madiki matambudziko, inotibvumidza kuti tisvike kwatinosvika nekureruka kwakanyanya. Google Maps Iyo zvakare ndeimwe yeakashoma eGoogle ekushandisa ayo asingawanikwe mune yakasviba modhi, kunyangwe kana kumberi kudiki kufambiswa kwakaburitswa pa Instagram kuchisimbisa kuti basa rekugadzirisa patsva riri kuenderera.
Kusvika kwa yakasviba modhi kuGoogle Mepu Izvo hazvifanire kungovimbisa yakakura kuzvitonga kuchengetedza, asi zvakare simbisa zvirinani kuona kwemamepu mune yakaderera mwenje mamiriro. Ngatiyeukei kuti kusvika kwe Android 10 Izvo zvakakonzera kusvika kwemazhinji erima modhi maapplication, asi iri Google iyo irikuenderera mberi nekukurumidza kunogamuchira restyling.
Aya ndiwo maitiro erima anoitwa muGoogle Mepu
Itsva Google Mepu yakasviba modhi inoratidzira iyo yese interface mumumvuri we grey, kusanganisira mepu. Mune marongero eGoogle Mepu tinokwanisa kugadzirisa chitarisiko, tichisarudza theme yatinoda kuve nekutadza kana kana tichida kuti ichinje zvinoenderana nemusoro wetsamba.
Paunenge warodha pasi yazvino vhezheni, matanho ku maitiro ekumisikidza rima maitiro muGoogle Mepu pane Android zvinotevera:
Vhura iyo Google Mepu kunyorera pane yako nhare uye bata yako account account pikicha kumusoro kwekurudyi kwekona.
Dhinda "Zvirongwa" kuti uwane menyu.
Mune iyo sarudzo menyu, enda kune iyo "theme" chikamu.
Sarudza iyo "Inogara Iri Rima Tema" kana "Yakangofanana neDhijitari theme" sarudzo kana iwe uchida kuti temaiti ishanduke otomatiki zvichienderana nesystem theme.
Neichi chishandiso chitsva chakaitwa, unogona kufamba uye kutarisa kumusoro madhairekitori usingadhonze bhatiri rako zvakanyanya.
Sezvauri kuona, iyi rima modhi yakafanana nemamwe maGoogle maficha senge Gmail, Mifananidzo, Play Store, Docs, Slides, pakati pevamwe.
Izvo zvakakodzera kuti utaure kuti chimiro ichi hachizokanganisa maitiro emepu kana tiri muGoogle Mepu yekufambisa nzira.